वर्षको उत्कृष्ट बोनसदाता एभरेष्ट बैंकबाट यस्तो घाटा, १०० प्रतिशत बोनसपछि के होला स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ? निगरानी -
अन्य वाणिज्य बैंकहरुको बजारमूल्य १५०० भन्दा कम रहँदा समेत सो बैंकको पछिल्लो बजारमूल्य प्रतिकित्ता २२७९ रहेको छ ।
काठमाडौं । यस वर्ष एभरेष्ट बैंकले समग्र कम्पनीहरुमध्येकै सर्वाधिक अर्थात् ७० प्रतिशत बोनस शेयर प्रदान गर्यो भने त्यसका अलावा ३३ प्रतिशत हकप्रद शेयर पनि प्रदान गर्दैछ । ७० प्रतिशत बोनसको मूल्य समायोजन हुनुअघिको दिनमा एभरेष्टको बजारमूल्य ३३ सयको हाराहारीमा थियो भने समायोजनपछिको १ हप्तामै करिब १६५० सम्म पनि झरेको थियो । केहीदिनअघि पुनः मूल्य समायोजन हुँदा बजार भाउ घटेर अहिले १३५० को हाराहारीमा सीमित हुन पुगेको छ । करिब ८ महिनाअघि समग्र बजार सूचककांक १७०० को हाराहारी रहँदा एभरेष्ट बैंकको बजार मूल्य करिब ३८०० थियो । अहिले बजार सूचकांक १५४४ रहँदा बैंकको सूचकांक १३४८ मा झर्न पुगेको छ । करिब ७ महिनाअघि बजार सूचक अहिलेकै बिन्दुमा रहँदाको अवस्थामा समेत एभरेष्ट बैंकको कारोबार ३२४९ रुपैयाँमा भएको थियो । सो दिन एभरेष्ट बैंकको १०० कित्ता शेयरको मूल्य ३ लाख २४ हजार ९०० रुपैयाँ रहन्थ्यो । त्यसपछिका दिनमा १०० कित्तामा ७० कित्ता बोनस थपिएको छ भने हकप्रदमार्फत् रु. १७००० मा थप ५७ कित्ता शेयर थपिने भएको छ । यसो गर्दा १०० कित्ता शेयर २२७ कित्ता हुन जान्छ । हिजोको अन्तिम मूल्य अनुसार हेर्दा एभरेष्ट बैंकको २२७ कित्ता शेयरको मूल्य ३ लाख ५ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ हुन आउँछ । बजार समग्र सूचकांक हिजोकै बराबर रहेको समग्र वाणिज्य बैंक समूह समेत करिब १५०० को हाराहारीमा रहेको दिनमा ७ महिनाअघि भएको सम्पत्तिको मूल्यभन्दा आजको सम्पत्तिको मूल्य करिब २० हजारले प्रत्यक्ष कम हुन आएको छ भने त्यसमा हकप्रदको १७००० सहित गर्दा ३७ हजारले कमी हुन आएको छ । त्यसमाथि ७ महिनाको उत्पादनमूल्य त झनै गुमाइएकै छ ।
यसरी हेर्दा यसवर्षको उत्कृष्ट बोनसदाता वाणिज्य बैंक एभरेष्ट बैंकले मर्जर तथा एस्किवजिशनलाई छोडेर हकप्रद र बोनसमा बल गर्दा लगानीकर्ताहरु स्वयं मारमा परेका हुन् । १०० कित्ता शेयर रहेको लगानीकर्ताले अहिले २२७ कित्ता शेयर रहेकोमा आनन्दित हुनुबाहेक अर्को कुनै विकल्प रहेको छैन ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको के होला ?
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले यस वर्ष ३३ प्रतिशत बोनसमार्फत् केही चुक्ता पुँजी बढाएको थियो भने एफपीओमार्फत् करिब २५ करोड चुक्ता पुँजी बढाई करिब ३ अर्ब थप पुँजी संकलन गरिराखेको छ । बैंकले सोही आधारमा चालु आवमा शत प्रतिशत बोनस शेयर प्रदान गर्ने योजना बनाइसकेको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक पछिल्लो समय २००० भन्दा बढी बजारमूल्य रहेको एकमात्र वाणिज्य बैंक हो । अन्य वाणिज्य बैंकहरुको बजारमूल्य १५०० भन्दा कम रहँदा समेत सो बैंकको पछिल्लो बजारमूल्य प्रतिकित्ता २२७९ रहेको छ । थोरै शाखासञ्जाल, थोरै सञ्चालन खर्च र उत्कृष्ट ठुला निक्षेपकर्ताहरुका कारण बैंकको पहुँच कम भए पनि बजारमा भने सो बैंक उत्कृष्ट नै ठहरिँदै आएको छ । यस वर्षपनि एफपीओमार्फत् प्रशस्त प्रिमियम जम्मा गरेकाले शत प्रतिशत बोनस दिएपनि अन्य बैंकहरुको जस्तो घाटा नै लाग्ने स्थिति भने नआउन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ तर २ अर्ब चुक्ता पुँजी हुँदा रहेको व्यापार र शाखासञ्जाल ८ अर्ब पुँजी पुग्दासमेत उही रहेकाले भावी दिनमा सो बैंकले यही अवस्थामा उत्कृष्ट लाभांश दिनसक्नेमा भने विश्वास गर्न सकिँदैन, तसर्थ लगानीकर्ता सचेत हुनु जरुरी छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र रहेका माइक�...
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक कामना सेवा विकास बैंकको खाताबाट रकम गायब हुने गरेको...
३५० रुपैयाँसम्ममा एफपीओ निष्काशन गर्ने बताएको सो बैंकको पछिल्लो बजार मूल्य ३४७ रुपैयाँ रहेको...
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले दुई बर्ष अगाडिको पुँजीवृद्धि योजनामा पुनर्विचार गर्दै...
फर्म नलिनेमात्रै होइन, यदि फर्म लिई हाले पनि त्यसको इन्ट्री नै नगर्ने गरेको पनि त्यहाँ भेटिएका...
साधारण शेयरधनीको हिस्सा ४९ प्रतिशत पुर्याउन निर्धनको यस्तो प्रस्ताव, ४० करोड बोनसका लागि बुक क्लोज कहिले ?
काठमाडौं । लघुवित्त विकास बैंकमध्ये सर्वाधिक पुँजी रहेको निर्धन उत्थानले साधारण शेयरधनीको...
मेगाले टुरिज्मसँगको मर्जर प्रस्ताव पारित गर्दा यसरी हेरिरहे अनिलकेशरी शाह
हलोदेखि हाइड्रोसम्म भन्ने नारा बोकेर नबिल बैंक छोडी मेगा बैंकमा डाडुपन्यू लिएका शाहले मेगा...
बजारमा सुधार अाउन माघसम्म कुर्नुपर्ने ! किन जाँदैछ बजारमा पहिराे ?
अहिलेको बजारको गिरावट आन्तरिक भन्दा बाह्य वातावरणीय प्रभावद्वारा निर्देशित छ । काठमाडौं ।...
हाइ प्रोफाइलको बार्गेनिङले एनएमबी बैंकको एफपीओ अनिश्चित ! एफपीओ नआए १ चौथाइ बोनस
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले जारी गर्न लागेको १ करोड १४ लाख कित्ता एफपीओ धितोपत्र बोर्डमा...